Wararka - OIS iyo EIS ee kamaradda zoom
OIS iyo EIS ee kamaradaha xannibaadda
Xasilinta kaamirooyinka waxqabadka dijitaalka ah wey bislaadeen, laakiin kuma jiraan muraayadaha kamaradaha CCTV.
Waxaa jira laba waji oo kala duwan si loo yareeyo saamaynta gariir-kaam.
Xasilinta muuqaalka muuqaalka ah waxay adeegsataa farsamooyin qalafsan oo qalabaysan oo ku dhex jira muraayadaha indhaha si sawirku u ekaado una suuragaliyo qabashada fiiqan. Waxay ku soo jirtay muddo dheer qalabka elektarooniga, laakiin si ballaaran looma aqbalin muraayadaha CCTV.
Xasilinta muuqaalka elektiroonigga waa khiyaano badan oo software ah, oo si firfircoon u xulanaysa qaybta saxda ah ee sawirka aaladda dareeraha ah si ay u muuqato in maadada iyo kamaraddu ay sii yaraanayaan.
Aynu eegno sida labadoodaba u shaqeeyaan, iyo sida looga dabaqo CCTV.
Xasilinta Sawirka indhaha
Xasilinta muuqaalka muuqaalka, oo loo yaqaan 'OIS' oo la soo gaabiyey, waxay ku saleysan tahay muraayadaha xasilinta indhaha, oo leh xakamaynta tooska ah ee PID algorithm.
Muraayadaha muraayadaha oo leh xasilinta muuqaalka muuqaalka ayaa leh mooto gudaha ah oo jir ahaan u dhaqaajisa hal ama in ka badan oo ka mid ah walxaha muraayadda ah ee ku dhex jira muraayadaha sida kamaraddu u socoto Tani waxay keeneysaa saameyn xasilloon, ka hortagga dhaqdhaqaaqa muraayadaha iyo kaameradda (laga bilaabo ruxitaanka gacmaha wadaha ama saameynta dabaysha, tusaale ahaan) iyo u oggolaanshaha muuqaal fiiqan oo aan badnayn in la duubo.
Kaamiro leh muraayad ay ku jirto xasilinta muuqaalka muuqaalka ayaa soo qaban karta sawirro muuqaal ah oo cad cad heerarka iftiinka ka hooseeya midka aan lahayn.
Khasaaraha weyn ayaa ah in xasilinta muuqaalka muuqaalka ay u baahan tahay waxyaabo badan oo dheeri ah oo ku jira muraayadaha indhaha, iyo kaamirooyinka OIS-ku qalabeysan yihiin iyo muraayadaha indhaha ayaa aad uga qaalisan naqshadaha adag ee adag.
Sababtaas awgeed, OIS kuma aysan bislaanin codsiyada kaamirooyinka xannibaadda CCTV.
Dejinta Sawirka Elektiroonigga
Dejinta Sawirka Elektiroonigga ah waxaa had iyo jeer loo yaqaan EIS muddo gaaban. EIS waxaa badanaa lagu ogaadaa barnaamijka softiweerka, waxba kuma laha muraayadaha indhaha.
Si loo xasiliyo fiidiyoow ruxruxaya, kamaraddu waxay soo saari kartaa qaybaha aan u muuqan inay u dhaqaaqeyso meertad kasta iyo korantada elektronikada ee aagga dalagga. Dalagga meeris kasta oo sawirka ka mid ah ayaa loo habeeyay si loo magdhabo ruxitaanka, waxaadna arkeysaa muuqaal fiidiyow ah oo siman.
Waxaa jira laba qaab oo lagu ogaan karo qaybaha dhaqaaqaya. Midka isticmaalka g-sensor, midka kale ayaa adeegsanaya ogaanshaha muuqaalka software-ka kaliya.
Inta badan ee aad dhaweyd, tayada hoose ee fiidiyowga ugu dambeeya ayaa noqon doona.
Kaamirada CCTV, labada habab ma ahan kuwo aad u wanaagsan sababtoo ah kheyraadka xaddidan sida heerka jir ama xallinta nidaamka on-chip. Marka, markaad furaysid EIS, waxay kaliya ku ansaxaysaa gariirka hoose.
Waxaan soo saarnay kamarad xannibaadda zoom optical ah, Kala xiriir sales@viewsheen.com wixii faahfaahin ah.